Fanohintohinana ny filaminam-panjakana : nampitandrina ny Foloalindahy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena | NewsMada
Hentitra ny minisitry ny Fiarovam-pirenena fa miaro hatrany ny fiandrianam-pirenena sy ny safidim-bahoaka ny Foloalindahy, manoloana ny fikasan’ireo olona hifofo ny ain’ny filohan’ny Repoblika.
“Misy ny fikononkononana hamono ny filohan’ny Repoblika, izay voafidim-bahoaka sy filoha faratampon’ny Foloalindahy. Azo lazaina izany fa manimba ny fiandrianam-pirenen’i Madagasikara ary manakorontana ny fiainan’ny vahoaka malagasy. Tsy azontsika ekena izany, satria voafidim-bahoaka ny filohan’ny Repoblika” hoy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard, teny Ampahibe, omaly. Ny safidim-bahoaka no arovana ary ijoroan’ny Foloalindahy, tandroka aron’ny vozona hiaro ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantenan’i Madagasikara.
Misy ireo olona avy any ivelany mikasa hanao asa fanakorontanana, ahina fa miaraka amina Malagasy ihany koa ary tafiditra amin’izany aza ny olona sasany eo anivon’ny mpitandro filaminana na ny Foloalindahy.
Hentitra ny fampitandremana
Noho izany, ho an’ireo marivo salosana any ambadika, noho ny fitiavan-tena manokana fa tsy mijery ny tombontsoa ambonin’ny firenena ka tsy manaja ny fitsipika eo anivon’ny Foloalindahy: mampitandrina azy ireo fa handray andraikitra ny minisitry ny Fiarovam-pirenena. Koa samy mandray andraikitra ny tomponandraikitra: ny tafika an-tanety miaro izay rehetra mety manohintohina ny fiandrianam-pirenena, ny tafika ana habakabaka hiaro ny sisintany, eo ny tafika an-dranomasina mijery izay olona mety miditra an-tsokosoko.
Mila jerena ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny tombontsoa ambonin’ny Tafika.
“Tsy misalasala izahay tomponandraikitra handray fepetra faran’izay henjana, raha sanatria misy mieritreritra hanao izany fanakorontanana izany ny eo anivon’ny Foloalindahy”, hoy izy.
Misy ny lalàna velona. Ho an’ny Foloalindahy manokana, eo ny fitsipi-pifehezana ara-pitsarana amin’ny fanompoam-pirenena ny amin’ny fanohintohinana ny filaminan’ny fanjakana sy ny famadihan-tanindrazana.
R.Nd./ Jean Claude